Icandelo le-Olima 2 likaHack yilelo elaligqitywe nguHack yilelo elalikhohlisayo, iiAmbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Olima ICandelo 2 lomnqweno yimfumba
Sebenzisa iCandelo le-Olima 2 ukukopela ukuphumelela yonke imipu yakho!
Ukufikelela kwiintsuku ezi-3
ICandelo lesi-2 iHacks alikaze libonakale lilungile, kutheni ulinda nje? Thenga isitshixo semveliso yosuku olunye-namhlanje!
Abasebenzisi bethu abathandekayo beGamepron abayi kwaneliswa lusuku olunye! Thenga isitshixo seMveliso yeVeki e-1 namhlanje!
Ukuhamba ukusuka kwiveki ukuya evekini ngezitshixo zakho zemveliso kunokuba yinto ecaphukisayo-Thenga isitshixo seMveliso seNyanga e-1 namhlanje!
Ngezixhobo ezifanelekileyo kwicala lakho, akukho mntu unokumisa ulawulo lwakho lokoyika. Ungangenisa iserver kwaye uyazi ukuba uya kuyoyisa kwasekuqaleni, nokuba boyisile abachasi be-AI okanye abadlali bokwenyani!
ICandelo 2 Olima kugula Information
UTom Clancy weCandelo 2 uhlala ethathwa njengomnye wemidlalo ekunzima ukuyidlala kwi-Intanethi, ngakumbi kuseto lokhuphiswano. Ukuba uluhlobo lomntu ongakwaziyo ukumelana nelahleko, ungakhathazeki - awuwedwa kuloo nto, kwaye sesinye sezona zizathu ziphambili zokuba sisebenze nzima ukukhupha elona Candelo 2 lithembekileyo . Ayisiyiyo le nto nje ukukopela kulula kakhulu ukuseta kunye nokusebenzisa, kodwa ikwangumboniso wobungqina! Nje ukuba ubhalise kulayishi kunye nokuNgqinelana okungaphezulu, ukumanyathelo nje ambalwa ukufezekisa ubukhulu.
Ixhasa iPVP kunye nePVE
UneCandelo 2 elinomdla kakhulu kwiWallhack kunye neCandelo 2 iAimbot ekhoyo ngaphakathi kwesi sixhobo. Utshaba lwe-ESP luyakwazi ukwenza ngokwezifiso ngokupheleleyo, ukuvumela ukuba utshintshe umbala ngokuthanda kwakho! Unokuhlengahlengisa inqaku loLwazi lweNtshaba ukubonisa ibha yezempilo kunye nomgama weentshaba kunye nobuhlobo.
Ulwazi lweAlly kunye neTshaba (ibar yezeMpilo, umgama)
Ukucwangciswa ngokupheleleyo kwemibala ye-ESP
I-Aimbot yoyilo lwe-PVE / PVP
Cwangcisa isikhethi esingundoqo
Malunga neCandelo 2 u-Olima
Ukuba ukule khasi, kunokwenzeka ukuba ukhe wadlala iCandelo 2 ngaphambili kwaye uyazi ukuba zinzima kangakanani ezinye zeendawo. Nokuba awuzami ukuthatha inxaxheba kwi-PvP, zininzi i-bots ezilawulwa yi-AI ezilungele ukukuthumela ukupakisha. Sebenzisa iCandelo 2 lethu iAimbot kuya kukubeka kwindawo engcono ukuze ungakhuphisani nabantu abakwi-Intanethi kuphela kodwa bakunike nethuba lokubenza bacinge ngobomi ngokwabo. Nje ukuba ubadilize amaxesha ambalwa baya kuzibuza ukuba uqhuba njani kakuhle, kodwa imfihlo yakho ikhuselekile kuthi! Fumana uncedo oludingayo ngeCandelo 2 le-Olima Hack.
Kutheni usebenzisa iCandelo 2 u-Olima ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Abanye ababoneleli abanakuze babeke umthengi kuqala, kwaye yeyona njongo iphambili apha kwiGamepron. Kutheni le nto sinokubaphatha abantu abagcina inkampani yethu ikhula kakuhle? Sifuna ukuba abasebenzisi bethu babe namava amahle, kwaye ngelixa oko kuza nokulindelwa okuphezulu, iseyinto esizingcayo. Ufuna ukusebenzisa iCandelo 2 u-Olima Hack kuba sele uyazi ukuba utyala imali kumgangatho ophezulu. isixhobo, ngumcimbi nje wokuhamba nayo! Sukuvumela abo abanye abaphuhlisi be-shady bakhohlise ekukhutsheni izixhobo zabo ezinobungozi, sebenza ne-Gamepron, kwaye uhlale ukhuselekile.
Awusabanjwanga xa kufikwa ekuhlengahlengiseni iCandelo 2 kuseto lomnqweno yimfumba. Abanye ababoneleli benkohliso baya kukunika kuphela iiseti ezithile zeeparamitha oza kusebenza nazo, oko kuthetha ukuba iindlela zakho zokugenqena zinokubonakala ngathi "zezendalo" phantse kwangoko. Unokwenza utshintsho oluninzi kwiCandelo lethu le-2 Olima Hack njengoko ungathanda ukusebenzisa i-in-game menu, ekwafumaneka ngokukhululekileyo. Lungisa isantya kunye nokuchaneka kweCandelo 2 leAimbot, okanye utshintshe nje ukuba zeziphi iindlela ze-ESP ozenzileyo. Awunyanzelekanga ukuba ulungele useto lwantlandlolo, njengoko uhlala unethuba lokutshintsha izinto!
Q5. Ngaba ndingadlala kwisisombululo esigcweleyo?
A5. Ewe, le cheat isebenza kwiscreen esigcweleyo.
Umdlalo wePron uzinikele ekubekeni amandla ezandleni zabasebenzisi bethu, yiyo loo nto icandelo lethu le-Olima 2 likaHack yilelo elithandwayo ngabantu abaninzi. Xa ufuna iziphumo ezivela kwiCandelo 2 ukukopela, i-GamePron yindawo ekuphela kwayo onokujonga kuyo.
Yithi hayi ekulahlekelweni! Ukuthenga isitshixo semveliso yeCandelo le-Olima 2 ukukopela namhlanje.
Ilindelwe Lawula necandelo lethu 2 Olima kugula?